Semtalku wuxuu muujinayaa sida CTR ay ula xiriirto darajadaada boggaaga
Qof kasta oo doonaya inuu ku faano ee suuq-geynta online-ka ayaa laga yaaba in uu wax ka qabto saameynta beerahasicir-celinta-celceliska (CTR). Inta badan suuqyada iyo shakhsiyaadka ay sameynayaan falanqayn isbeddel ah, isku day inaad ka baxdo tartamayaasha adoo raacayaIsbedelada SEO. Si kastaba ha noqotee, baaritaanyada Google iyo aragtiyaha tartanka ayaan wali la garanayn sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo aan shaaca ka qaadin shuruudaha algorithmfuran. Laakiin waxa aan ognahay hubaal waa in CTR ay saameyneyso darajo sida arrin aan toos ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, isbeddelka suuq-geynta online-ka ah ayaa keena sawir ka duwan - computer repair service san jose. Tusaale ahaan, kontoroolka CTRWaxyaabaha saamiga Google. Badeecooyin badan oo dijital ah ayaa isku dayaya inay sameeyaan inta ugu badan ee muuqaalkan ah. Maqaalkaan, Jason Adler, Guusha MacaamiishaMaamulaha Sare waxay muujinaysaa kala duwanaansho u dhaxeeya CTR iyo darajada, sharaxaad ka bixinta sida loo tixgeliyo. Waxaa sidoo kale jira talooyin muhiim ah oo kaa caawin doonaQiimaha Google ee loo yaqaan 'CTR' wuxuu si fiican u qabtaa SERPs-ka organic.
Sida saamiga CTR saameyn ugu yeeshaan
Si aad uqeybiso shabakadaha si wax ku ool ah, waa in ay jiraan shuruudo lagu dhigayo bogagga shabakadahaamar Sidaas darteed, Google waxay isticmaashaa macluumaadka sida xogta guji. CTR waxay saameysaa heerka guusha ee SERP natiijooyinka. Sidaa darteed, bogagga internetka ee ugu weyntirooyinka farriinta ayaa lagu xalliyaa meesha ugu sareysa, halka kuwa leh dhowr foori ayaa lagu dhejiyaa hoosta. Algorithm ayaa lagu qadarinayaa in uu tixgeliyo mawduucaoo leh tiro badan oo ah fiilooyin khuseeya..Inta badan makiinadaha raadinta waxay shuruudahan ku dabaqaan algorithms search. Google wuxuu kugula talinayaa bloggersin uu noqdo mid muhiim u ah lafaguridda. Maaddaama maadada ay noqotey mid joogto ah, ficillo ayaa dhacaya. Tilmaamyadani waxay ka dhigayaan bogga inay helaan abaalmarin aad u fiicanqiimeyntan markaa waxay kordhineysaa natiijooyinkaaga SEO.
Marka labaad, Google waxay kuxirantahay CTR sida shuruudaha lagu muujinayo OneBox. Awebsaydhku waa inuu lahaadaa ugu yaraan CTR si uu u helo OneBox website-keeda. Google wuxuu leeyahay nidaam toos ah kaas oo baari doona qiimaha riixaya(CTR) bandhig halmar ah oo halmar ah oo ku saabsan hal-sheyba. Xaaladdani waxay sharaxi kartaa qaar ka mid ah isbeddellada xilliyeed xilliyada gaar ahaanbogga ama bogga. Tusaale ahaan, bogga internetka wuxuu noqon karaa mid si fiican u qabta laakiin maanta maahan guusha guuleysiga. Sidaa darteed, suuq geyntawaa in loo-shaqeeyaa u-tixgelinta asaaska muhiimka ah. Daryeelkaada Xeerkaaga Ganacsi Lacageed (CTR) wuxuu ka dhigan karaa rikoodhka websaydka si fiican si fiican makiinada loo raadiyo.
Websaydhku waa inuu lahaadaa qiimo hoose oo qiimo leh. Ka qayb qaadashada goobta waa muhiimmacluumaadka u baahan rikoorka. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in dadka riixaya xiriirinta shabakadaada si ay ula socdaan amudo dheer. CTR waxay hagaajinaysaa maamulka boggaaga iyada oo loo eegayo xiriirka, kaas oo hagaajinaya darajadaada. Loogu Talagalay CTR-da inay helaan faa'iidada ugu badanka mid ah SEO, mid ka mid ah u baahan yahay si ay u abaabulaan content website wanaagsan ee titles iyo tags tags. Google ayaa boggaga internetka ku soo daraya boggaga ku taxluuqaadacontent. Waxyaalaha aadka u sareeya waxay leeyihiin qiimo sare oo loo yaqaan 'rate'. Algorithm Google wuxuu adeegsanayaa tilmaantan si uu u kala saaro booska gaarka ahgoobta ayaa u qalantaa
Bixiyeyaasha internetka ayaa laga yaabaa inay si joogta ah ugala hadli karaan in Google CTR saameyn ku yeelan karto iyo in kalenatiijooyinka mashiinka raadinta ama aan. Xaqiiqadu waxay tahay in CTR, dhab ahaantii, waxay ka caawisaa website-ka inuu yahay mid sareeya. Hase yeeshee, way adkaan kartaa in la fahmo xidhiidhkainta u dhexaysa CTR iyo SEO. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu kugu caawiyay inaad fahamto xiriirka ka dhexeeya labadan durba iyo siyaabahawaxaad samayn kartaa qiimaha Google-kaaga ah ee loo yaqaan 'CTR' si fiican u qabta SERPs-ka organic.